Global Voices teny Malagasy » Nosintonin’ny Governemanta Ao Singapore Ny Famatsiambola An’ity Tantara An-tsary ity, Ary Maniry Ny Hahabetsaka Kokoa Azy io Ny Mpamaky Amin’izao Fotoana · Global Voices teny Malagasy » Print
Nosintonin'ny Governemanta Ao Singapore Ny Famatsiambola An'ity Tantara An-tsary ity, Ary Maniry Ny Hahabetsaka Kokoa Azy io Ny Mpamaky Amin'izao Fotoana
Voadika ny 04 Jona 2015 7:50 GMT 1	 · Mpanoratra Kirsten Han Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Politika, Sivana, Zavakanto & Kolontsaina
Avy amin'ny pejy Facebook-n'i Sonny Liew
Tamin'ny faran'ny herinandro lasa no namarotra ny laharany voalohany ho famapahafantarana azy ny tantara an-tsary iray, taorian'izay dia nivoaka ny vaovao hoe nosintonin'ny Filankevitra Nasionaly Momba ny Zavakanto ao Singapore (NAC) ny fanohanany ara-bola ny fanontàna azy io mitentina 8.000 dolara Singaporeana (6.000 dolara Amerikana eo ho eo).
Ny “Art of Charlie Chan Hock Chye” dia tantara an-tsary iray vokarin'i Sonny Liew, mpahaikanto iray sady mpanao sary fanaingoana izay efa nanao asa ho an'ny tantara an-tsary DC Vertigo sy Marvel. Nahazo ny Loka avy amin'ny NAC ho an'ny Tanora Mpahaikanto ihany koa i Liew tamin'ny 2010.
Na dia efa nandalina sy nanaiky ny taratasy fangatahana tohana ara-bola ho an'ilay tetikasa hamoahana boky aza ny NAC, taty aoriana dia nosintoniny ny fanohanana satria voalaza ho tsy nanaja ny “torolàlana momba ny famatsiambola” ilay boky.
“Mety hanimba ny fahefàna na ny maha-ekem-bahoaka ny governemanta sy ireo andrimpanjakana ny famerenana mitanisa ny tantaran'i Singapore ao anatin'ilay boky, ka araka izany dia manitsakitsaka ny torolàlanay momba ny famatsiambola.” Khor Kok Wah, tale ambony ao amin'ny sampana haisoratra ao amin'ny NAC, nilaza  tamin'ny mpanao gazety hoe. “Mivoaka ao anaty aterineto ireo torolàlan'ny famatsiambola ataon'ny filankevitra ary fantatra tsara eo amin'ny tontolon'ny haikanto.”
Manaraka ny dian'i Charlie Chan, ilay maherifo, mpahaikanto iray mpanoratra tantara an-tsary, ity boky ity, ary mitety ireo taona maro nandrafetana ny tantaran'i Singapore. Lee Kuan Yew , praiministra ao Singapore, hatramin'i Lim Chin Siong (mpifaninana ara-politika amin'i Lee, izay notànana tsy nisy fitsaràna taty aoriana), dia hita ihany koa ao anatin'ilay boky. Lazain'ilay tantara ihany koa ny famonjàna tao anatin'ilay fandraofana faobe fantatra tamin'ny hoe Operation Spectrum tamin'ny 1987 nanjo ireo mpisolovava, mpiasa sosialy, sy ireo mpikatroka mafàna fo.
Lohahevitra iray saropady ny fandinihana ny tantaran'i Singapore, indrindra fa rehefa misy olona manohitra ny fitantaràna ofisialy ao amin'ny firenena. Raha nanamafy ireo politisiana sy ireo mpaneho hevitra fa noho ny antony politika no nanaovana ireo fisamborana, ny Antoko Hetsiky ny Vahoaka eo amin'ny fitondrana kosa—izay mitarika ny governemanta efa hatramin'ny 1959—misisika milaza fa noho ny antony filaminana sy fitoniam-pirenena no nisintonana ilay famatsiana vola.
Niteraka ho azy ny fifantohantsaina bebe kokoan'ny media sy ny vahoaka ho any amin'ilay bokin'i Liew ny fisintonana indray ilay famatsiana. Manodidina ny 270 isa no efa nisy nividy tamin'ny Sabotsy, fotoana namoahana azy voalohany, ary efa lafo daholo ireo 1.000 isa navoakan'ny fanontàna voalohany hatreto.
Awesome turnout at launch of The Art of Charlie Chan Hock Chye today in Singapore kinokuniya !… https://t.co/KUsoTkC6Au 
— Cheryl Liew (@cherylliew) May 30, 2015 
Fivadihan-javatra mahavariana tamin'ny famoahana voalohany ny “The Art of Charlie Chan Hock Chye” androany tao Singapore kinokuniya !
Nanoratra tao amin'ny Facebook  ho fisaorana ny olona noho ny fanohanan'izy ireo i Sonny Liew, ary nisarika ny saina ho amin'ireo olana mikasika ny anjara toeran'ny volam-bahoaka amin'ny haikanto:
Ny mbola fanontaniana mipetraka dia ny anjara toeran'ny fikambanana iray nasionaly momba ny haikanto, ny anjara toeran'ny volam-.bahoaka, iza no manapaka hevitra momba ny hoe ahoana no nandaniana azy ary nahoana no nolaniana izy ireny. Tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fiheverana ny maha-haikanto fa tsy ho voafatotry ny teritery ara-politika ve ny NAC? Inona no mason-tsivana hanapahana hevitra hoe tsy nanaraka ny fepetra sy faritra napetraka ny asa iray? Izany eo ihany, fa maninona no tsy tokony ho afaka hiahy tena ho azo amidy amin'ny fomba maharitra ny taokanto tsara?
Nanontany tena ihany koa ireo Singaporeana momba ny mety hahafahan'ny tantara an-tsary manimba ny fahefam-panjakana:
Bryan Chan Yin Seng  Raha toa ka tantara kely iray feno hanihany no afaka manimba ny fahefana sy ny fankatoavana azy, tokony tena fanontaniana voalohany indrindra apetraky ny governemanta amin'ny tenany ny fanontaniana momba ny harefon'ny fahefan'io governemanta io sy ny maha-ara-dalàna azy.
Chee Hoe Siew  Boky tantara an-tsary iray mampiasa ny tantaran'i Singapore ho fototra iaingàny io. Ahoana no hitakiana aminy hanana fijery tena mety maneho ny tantara? Raha izany no izy, tokony hanao dingana ny governemanta hampivondrona ny bokin-tantara tsirairay.
Ao amin'ny media sosialy, maro no nahamarika fa nitondra tombony ho an'ny famarotana ilay boky ny fisintahan'ny NAC:
.@kixes  surely the only thing better than an arts grant in Singapore is the govt withdrawing an arts grant.
— Rob O'Brien (@robwriting) June 3, 2015 
.@kixes  tena marina fa ny hany zavatra tsara noho ny tohana ara-bola ho an'ny haikanto ao Singapore dia ny fisintonan'ny governemanta ny famatsiana ny haikanto
Go buy & support @sonnyliew  ‘s new book the Art of Charlie Chan Hock Chye to counter this self censorship nonsense! http://t.co/SFTv8byJtn 
— Cheryl Liew (@cherylliew) May 29, 2015 
Mandehana mividy & manohana ilay boky vaovao novokarin'i @sonnyliew  “The Art of Charlie Chan Hock Chye” ho fanoherana ity fanivanan-tena tsy misy dikany ity
Tsy maintsy namerina ny S$6,400 (USD $4,700) izay efa nolaniany ny Epigram Books, mpanonta ilay boky, ary nampanonta soratra fametaka mba hanakonana ny fangon'ny NAC tao anatin'ny boky.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/06/04/70723/
 Lee Kuan Yew: https://globalvoicesonline.org/2015/03/29/community-tributes-for-lee-kuan-yew-draw-a-million-people-in-singapore/
 May 30, 2015: https://twitter.com/cherylliew/status/604536316496363520
 Bryan Chan Yin Seng: https://www.facebook.com/theonlinecitizen/posts/10153454398286383?comment_id=10153454774386383&offset=0&total_comments=22&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
 Chee Hoe Siew: https://www.facebook.com/theonlinecitizen/posts/10153454398286383?comment_id=10153455008111383&offset=0&total_comments=22&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
 June 3, 2015: https://twitter.com/robwriting/status/605962365775966208
 May 29, 2015: https://twitter.com/cherylliew/status/604179620443783168